Semalt सुझावहरू तपाईंको SEO योजना र बजेट गर्ने बारे
जो खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको योजना र बजेट गरिरहेका छन् तिनीहरू दुई कारणले पासोमा पर्न सक्ने जोखिम। पहिलो सम्भावित समस्या योजना हुन असफल, र दोस्रो एक बजेट विनियोजन गरिरहेको छैन। उनीहरू भन्छन्, योजना गर्न असफल विफल गर्न योजना बनाएको छ।
एसईओ मा, असफलता धेरै कारकहरू द्वारा विशेषता हो, जसमा पैसा बर्बाद गर्नु, अवसरहरू बर्बाद गर्नु र समय बर्बाद गर्नु समावेश छ। जब यो एसईओको कुरा आउँछ, दिगो बजेट र योजना सिर्जना गर्नु सफलताको दिशाका मुख्य चरणहरू हुन्। एक ग्राहकको रूपमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले खोज प्रक्रियाहरू सुरु गर्नु अघि खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनको आधारभूत कुरा बुझ्नु।
फ्रेंक Abagnale, Semalt डिजिटल सेवाहरु का ग्राहक सफलता प्रबन्धक तथ्यहरु लाई व्याख्या गर्दछ जसले तपाइँलाई SEO लाई बुझ्न मद्दत गर्दछ।
प्रभावकारी खोज इञ्जिन अनुकूलन सस्तो छैन
तथ्या .्कले देखाउँदछ कि ग्राहकले monthly 5,000 को मासिक आधारमा भुक्तान गर्न तयार हुनुपर्दछ, प्रतिस्पर्धी फर्मबाट भरपर्दो एसईओ सेवाहरू लिन ग्राहकले तिर्न सक्ने न्यूनतम रकम being,००० हो।
फोर्ब्सका अनुसार धेरै निगम र कम्पनीहरूले एसईओमा ठूलो मात्रामा पैसा खर्च गरिरहेका छन्। तथ्यको रूपमा, मासिक आधारमा विस्तृत र उच्च गुणवत्ताका एसईओ सेवाहरू प्रस्तुत गर्नa२००० भन्दा कम एसईओ फर्म भुक्तान गर्नु महत्त्वपूर्ण छैन। जे होस्, एसईओ का केहि उप-सेक्सनहरू लाई $ १००० सम्मको प्रबन्ध गर्न आवश्यक पर्दछ।
कम्पनीमा एक प्रभावी एसईओ अभ्यास स्थापना गर्न इच्छुक एक ग्राहक, एक वर्षको लागि औसत मा $ 46,000 हुनुपर्दछ। यस प्रकारको नगदीको साथ, तपाईं एसईओ एजेन्सीहरू र विशेषज्ञहरूसँग काम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन न्यूनतम समयमा प्रभावकारी परिणामहरू प्रस्तुत गर्न इच्छुक हुन्छ।
काम गर्न एसईओ एजेन्सी छनौट गर्दा, अवश्य पनि, धेरै कारकहरू खेलमा आउँदछन्। कम्पनीको कार्यभार, यसको मापन र अनुभवले मूल्य गठनलाई असर गर्ने पक्षहरूको मणि पूर्ण गर्दछ। उदाहरण को लागी, Semalt मा SEO सेवाहरु को मूल्यहरु औसत बजार मूल्यहरु को आधा हो किनभने दुई मुख्य कारणहरु - आदेश को एक ठूलो कारोबार र कर्मचारी को उच्च क्षमता। यसैले, उत्तम विकल्प भनेको एजेन्सीहरूको खोजी गर्नु हो, जसले मूल्य र अनुभवको उत्तम मिश्रण प्रदान गर्दछ।
एसईओ लाई दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा विचार गर्दै
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसनलाई काम गर्न दिन न्यूनतम समय कति हो? सामान्यतया, यसले SEO लाई तपाईलाई दिगो नतिजा ल्याउन to देखि १२ सम्म लिन सक्दछ, जहाँ to देखि months महिनाको समय फ्रेम न्यूनतम नतीजाहरुको लागी कुशल हुन्छ। पहिलो दुई महिनाको लागि, त्यहाँ कुनै पनि आवश्यक नतीजाहरूमा पुग्नको लागि एकदम सानो मौका छ।
पहिलो दुई महिनाको अवधिमा धेरै जसो समय प्राविधिक एसईओ अडिट गर्न र भविष्यमा हुने प्रगतिको लागि समर्पित हुनुपर्छ। त्यहाँ कम से कम परिवर्तनहरू पहिलो महिनामा एसईओ अभ्यासमा पेश गरिएको छ, र कामको दोस्रो महिनाको अन्त्यसम्म केही नतीजाहरू देखा पर्ने देखिन्छ।
वास्तविक लगानी दोस्रो वर्षमा महसुस हुन्छ, जब साइट मालिकहरूले आश्चर्यजनक पारिश्रमिकहरू प्राप्त गर्न सुरु गर्छन्। योजना र बजेटिंगको निम्न पाँच चरणहरूले तपाईंलाई तपाईंको छनौटको एसईओ फर्मसँग काम गर्नको लागि तैयार गर्दछ:
क) प्रगति मापन गर्नुहोस्
एसईओ को सफलता को लागी जब दीर्घकालीन रणनीति एक आवश्यक आवश्यकता छ। तपाईंको एसईओ अभियानको योजना र बजेटमा लिने चरणहरूमा काम गर्दा, स्तर निर्धारण गर्नुको सट्टा ट्राफिक सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्नु बढी राम्रो हुन्छ। एसईओ मा, बिक्री, लीड्स, र ट्राफिकमा ध्यान केन्द्रित गर्नु क्रमबद्धतामा ध्यान दिएर भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ।
बी) लक्ष्य निर्धारण
तपाइँको एसईओ अभियान को अन्त मा, तपाइँ वास्तविक सफलता कस्तो देखिन्छ बुझ्नु पर्छ। वास्तवमा, अर्को २ बर्षमा बिक्रीको शर्तमा मासिक प्रतिशत वृद्धि र %०% भन्दा बढी न्यूजलेटर र म्यागजिन सदस्यताहरू सफलताको रूपमा निर्धारित गरिनेछ। SEO मा सब भन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न आफ्नो लक्ष्य तिर काम गरिरहनुहोस्।
c) आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्
यदि एक एसईओ पेशेवर मा हिंडे र आगामी १२ महिनामा तपाईको बिक्री प्रतिशत बढाउने वाचा गरेमा तपाई कति तिर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? उत्तम मान अगाडी राख्नुहोस् यदि त्यहाँ प्रमाणहरू छन् कि यस्तो संभावना तपाईंको दृढ सफलताको लागि वास्तविक हुनेछ।
d) बजेट निर्धारण
तपाइँको लक्ष्य प्राप्त गर्न भुक्तान गर्न इच्छुक मानले तपाइँलाई दिगो बजेट सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईको एसईओ अभियानमा तपाईले आफ्नो लक्ष्य साकार गर्न चाहानु भएको भन्दा बढी खर्च नगर्नुहोस्।
e) तपाईंको उत्तम क्षमतामा प्राथमिकता दिनुहोस्
तपाइँको केहि एसईओ लक्ष्यहरू प्राथमिक स्थितिमा राख्नुहोस् र त्यस अनुसार थप काम गर्नुहोस्। तपाईंको व्यवसाय मोडेलका लागि एसईओका कुन पक्षहरू सब भन्दा सान्दर्भिक छन् भनेर निर्धारण गर्न एसईओ विशेषज्ञहरूको जटिल विश्लेषण आवश्यक छ, जोसँग तुलना चलाउन आवश्यक अनुभव छ।
तपाईंले आफ्नो एसईओ एजेन्सी भाडामा लिइसक्नुभएपछि, निम्न चरणहरूमा कार्य गर्नुहोस् दीर्घकालीन फलदायी सहयोग स्थापना गर्न।
१. तपाईको एसईओ फर्मलाई सबै महत्वपूर्ण विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस्
छिटो परिणामहरू प्रस्तुत गर्न तपाईंको एसईओ फर्मसँग तपाईंको वेबसाइटमा पूर्ण पहुँच हुनुपर्दछ। तपाईंको वेबसाइट विवरणहरू प्रस्ताव गर्न असफल भएमा काममा मुद्दा चलाउन ढिलाइ हुनेछ।
२. तपाइँको एसईओ फर्म ठाउँ दिनुहोस्
तपाईंको एसईओ फर्म भर्ती पछि, तिनीहरूलाई तपाईंको वेबसाइटहरू प्रबन्ध गर्न दिनुहोस् तपाईंको कार्यहरू पूरा गर्न।
SEO. एसईओ रिपोर्टमा पहुँच गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई पढ्नुहोस्
बृहत SEO फर्महरु आफ्नो कार्य को स्थिति मा रिपोर्ट प्रस्ताव गर्दछ। एक ग्राहकको रूपमा, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई गडबडीबाट बच्नको लागि रिपोर्ट राम्ररी पढ्नुहुन्छ।
एसईओ एक दीर्घ-अवधि रणनीति हो जुन योजना र बजेट सही ढाँचा प्रयोग गरेर राखिन्छन् जब दीर्घकालीन सफलता प्रदान गर्दछ। SEO मा, तपाइँको प्रतिस्पर्धीको गतिविधिलाई कहिल्यै पछ्याउँनुहोस् किनकि तिनीहरूले गल्ती गरीरहेका छन्। माथि उल्लिखित चरणहरू र दिशानिर्देशहरूले तपाईंलाई प्रभावकारी SEO अभियान गर्न र वास्तविक भुक्तानी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।